Izihloko ezili-10 zokwamkela ekwindla nakuko konke ukuthanda | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Uvavanyo, Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Inoveli yothando, Imibongo
Ekwindla kuyeza. Ekugqibeleni. Elona xesha lam ndilithandayo lonyaka. Utshintsho lwembonakalo yomhlaba, kupholile kuza, iintsuku ziya zifutshane ... Ngamafutshane, iatmosfera iyahlulwa ukuba ifundwe. Ukwindla nako ixesha kunye nomthombo wokhuthazo, njengoko kwenzekile kwaba babhali bali-10 xa babebhala ezi zinto Iincwadi ze-10. Kuzo zonke izinto ozithandayo, ze ezinkulu nezincinci, zemfundo, zemibongo, izincoko, ezothando, bahambi. Izindululo zokujonga, ukufumanisa okanye ukufumanisa kwakhona.
1 Ekwindla eLondon - uAndrea Izquierdo
2 Ndikulindile kwikona yokugqibela yasekwindla- uCasilda Sánchez Varela
3 Imigqomo yasekwindla- uDiana Gabaldón
4 Wamkelekile Ekwindla! - Iingelosi Navarro
5 Incwadi yasekwindla-Rotraut Susanne Berner
6 Ilanga lekwindla-uRosa Gómez
7 Kwindla laseRoma-uJavier Reverte
8 Ingoma yeKwindla kwiNtlakohlaza- uMarcelo Galliano
9 Ukwindla kwamaXesha Aphakathi - uJohan Huizinga
10 Ekwindla yeeNgelosi eziMnyama-UKristy Spencer kunye noTabita Lee Spencer
Ekwindla eLondon -Andrea Izquierdo
Lo mbhali mncinci waseZaragoza udibanisa izifundo zakhe zoMthetho noLawulo lwezoShishino kunye nokubhalwa kothotho oluqala ngale noveli yapapashwa ngo-2016.
lily ufika kwihotele i-Ellesmere kwi Hyde Park. Uye wangeniswa eyunivesithi ngenxa isifundi kwaye woyika ngendawo yakhe yokuhlala entle. Apho udibana khona UMeredith noAva, abafana neentlanzi emanzini kuloo ndawo kwaye banomdla ngakumbi ukuba iimfihlo zabo azivezi. Baye nabo UConnor, uRex, uMartha, uTom, uFinn no-Oliver, uLily ebengasokuze afune ukumbona kwakhona. Kwaye wonke umntu amabali abo ayadibana.
Ndikulindile kwikona yokugqibela yekwindla -Casilda Sánchez Varela
Inoveli yothando abalinganiswa bakhe, UCora Moret kunye noChino Montenegro, badibana phakathi kwiminyaka yee-XNUMX ngenqwelomoya eyedwa eya eCádiz. Baneminyaka elishumi elinesixhenxe ubudala, banengqondo, bayathandabuza kwaye abayonto. Uphupha ngokuba ngumbhali. Kwaye ubuza yonke into. Kodwa bobabini baya kuqondana njengemiphefumlo yamawele kunye neyabo ibali lothando kuya kuqhubeka, ngexeshana, kude kube sekupheleni kweentsuku zakhe.
Imigqomo yasekwindla -UDiana Gabaldon
Inoveli engakumbi yothando kunye nenye ookumkanikazi bohlobo olo. Nguwo isavenge sesine yothotho Ngaphandle, ibekwe kude Iikholoni zaseMelika. Apho bafika ngo-1766 UClaire noJamie emva kokubaleka eScotland. Bahlala ezintabeni zaseNyakatho Carolina ngethemba le Yakha ifama kwaye uhlale kude Yenguquko yaseMelika ezayo. Kwixesha elizayo UBrianna randall Ulahlekelwe ngumama wakhe kwaye ufuna ukwazi ngoyise, ebengamazi. Kodwa ukufumanisa okuphazamisayo malunga nabazali bakhe kukhokelela kuye ukuhamba ukuya kwixesha elidlulileyo ukutshintsha imbali.
Wamkelekile Ekwindla! - Iingelosi Navarro
Izihloko azinakuba zilahlekile ezincinane nantsi ke eya kuqala. Kule ncwadi kuninzi imisebenzi isethwe ekwindla, ilungele ukonwabisa ngexesha lohambo, iholide kunye neentsuku zemvula. Nazi iipuzzle, mazes, squiggles ... Kwaye konke ukuqhubeka nokufunda ukubala, ukuchonga iikhonsepthi, ukunxibelelana kunye nombala.
Incwadi yasekwindla -I-Rotraut uSusanne Berner
Kwaye le yesibini, eyeyakhe kwaye Gqibezela olu luhlu lombhali kumaxesha onyaka. Kwakhona mze keliso, iphepha eliphindwe kabini, ligcwele ngabalinganiswa, iinkcukacha, iimeko kunye nemeko ezinxulumene nekwindla. Akukho mbhalo, eyenza kube lula kubo bobabini abafunda kwangaphambili kunye nabafundi bokuqala ukonwabela amabali amaninzi abaliswa ngemizobo.
Ilanga lekwindla -Rosa Gomez
Akunakwenzeka ukuba Imibongo Ekufundeni okuthile ngeli xesha. Lo mbhali usizisela yena kwesi sihloko. Iiroses, uncwadi, amandla engqondo kunye nobuhle bolwimi ukuvuselela umoya kwaye uzive ukomelela ngakumbi.
Ekwindla yamaRoma -UJavier Reverte
Njani na uhambo xa ubushushu bungasalawuli. Ngaba ikho indawo ebhetele kune IsiXeko esingunaPhakade ukuchitha isilayi sekwindla? UJavier Reverte usixelela kwidayari umbono wakhe «isixeko sezixeko». Ngendlela yakhe yobuqu, egcwele inkanuko, inkcubeko, imbali, isihobe, uburharha kunye nokuthantamisa.
Ingoma yasekwindla entwasahlobo -UMarcelo Galliano
Lo mbhali IArgentina usizisela le ncwadi isixelela ibali lakhona Umfana oneminyaka engamashumi amabini ukusuka kumatyotyombe Buenos Aires. Qalisa ukusebenza kwindawo yokuhlala ukunyamekela umntu ogulayo, obomi babo buza kucinywa kwiinyanga ezimbalwa. Kodwa kuninzi okungaphaya kokubonakala kwale ndoda intle, evuthiweyo, eyimali eyi-milionea ayokuyifumana kwaye ayitshintshe. Imibongo, isigqebelo, ukuthanda, uburharha kunye neenkanuko kuvakala kamnandi.
Ekwindla yamaXesha Aphakathi -UJohan Huizinga
Lo mfanekiso wobomi, ukucinga kunye nobugcisa ngexesha inkulungwane yeshumi elinesine neyeshumi elinesihlanu eFrance naseNetherlands yinto yakudala ukusuka ngo-1927. U-Huizinga usibonisa a I-fresco enkulu ukusuka kwixesha eliphakathi evumela ukwakhiwa kwakhona kwexesha.
Ukwindla kweengelosi ezimnyama -Kristy Spencer kunye noTabita Lee Spencer
Ipapashwe ngo-2014, yiyo Inxalenye yesibini yesaga Iingelosi ezimnyama ebhalwe ngoodade uKristy kunye noTabita Lee Spencer. Isixelela ibali labanye oodade ababini, UDawna kunye neIndie, Ukuhlala kwifama ephantse yashiywa izaliswe ziinkumbulo zobomi obudlulileyo. Bahluke kakhuluKodwa kubonakala ngathi kubo bobabini uthando aluvumelekanga. Okanye mhlawumbi akunjalo. Phakathi kobukho bazo banxibelelana a imfihlo eyoyikekayo nothando ehlala ixesha elide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Izihloko ezili-10 zokufumana ukuwa kunye nazo zonke izinto ozithandayo
Eyona misebenzi ilungileyo kaStephen King